Vaovao - manomboka miasa amin'ny 18 feb 2020
Noho ny virus Corona dia manomboka miasa izahay 18faha Febroary 2020rehefa avy niato ela be. Amin'ny alàlan'ny tranobe Green, tiako ny milaza fisaorana noho ny fanohananareo amin'ny taona 2019 sy ny fiahiahy anay mandrakariva, hifantoka hatrany amin'ny sehatry ny indostrian'ny EPS izahay, manome ny serivisy matihanina ho anao. Manantena izahay fa afaka miara-miasa bebe kokoa amin'ny taona 2020. Misaotra.
Ankoatr'izay, ny virus Corona dia tsy lavitra antsika rehetra. Noho izany, amin'ny fotoana manokana toy izany, manintona ny sainao aho hanaraka ireo hevi-dehibe momba ny fiarovana. Toy izany ny fitsangatsanganana any ivelany sy amin'ny toerana ampahibemaso, ary koa mitafy sy mamono otrikaina ny Mask. Miangavy anao mba hikarakara ny tenanao sy ny fianakavianao.
Masinina famolavolana endrika Eps Cornice, Masinina Cornice Cornice Eps, Eps fanaovana koronosy Cornice, Eps Cornice koronosy tsipika, Eps Cornice Famolavolana tsipika famokarana, Eps sombin-javatra Cornice endrika famolavolana milina,